तपाई भन्नुस् अब को हो महानायक? को हो महानायिका? (भिडियो):: Mero Desh
तपाई भन्नुस् अब को हो महानायक? को हो महानायिका? (भिडियो)
Published on: ८ आश्विन २०७८, शुक्रबार ०२:४४
काठमाडौँ तपाई भन्नुस् अब को हो महानायक? को हो महानायिका?यो देशमा अ‘धिकांश मानिसले काम नै नपाए का हुन कि के हो? घरि दिपकराज गिरी म‘हानायक भने को छन घरि दिपाश्री महानायि का त कहिले भुवन केसी महानायक कहिले गौरी मल्ल महानाियका कहिले करिश्मा
वा राजेश हमाल आखिर किन वि‘वाद छ त? कहिले सम्म यसरी चल्छ? यसको उत्तर कसले खोज्ने? केहि त हुन परो अब फिल्म नगरी यतिबेला पुनः महानायक र महानायिका को बिवादमा फसे को छ ।“ हालै राजधानी मा भएको एक कार्य क्रममा अभिनेता भुवन केसी निर्देशक शोभित बस्नेत
ले अभिनेता राजेश हमाललाई फेरि महानायक अभिनेत्री करिष्मा मानन्धरलाई म‘हानायिका मान्न अस्विकार गरे ।यी दुई फिल्मकर्मी यति मै रोकिएनन् । हो उनीहरु ले “अर्का अभिनेता शिव श्रेष्ठलाई महानायकको संज्ञा दिए भने अनि
अभिनेत्री गौरी मल्ललाई म“हानायिका को उपादी भिराई दिए तर शिवले केही प्र‘तिक्रिया नजनाए पनि गौरी मल्ल ले चांही आफु कलाकार मात्रै रहेको र महानायिका नभए को बताए की थिईन् ।म“हानायक र म“हानायिका को यो
उपादी दिने आधार के हुन् ?के यो राज्यले दिने मनो’पदवी जस्तै हो ? बिवादमा अन्य धेरै कलाकारहरु बाहिर आएका छन् कोही राजेश हमाललाई महानायक मान्न तयार छन् भने कोही उनी सुपरस्टार मात्रै हो भन्छन् । थप भिडियोमा हेर्नुस्: